MIYUU SUURTAGAL YAHAY IN LAGU QUUDIYO BAKAYLAHA LEH QAMADIGA: SIFOOYINKA FAA'IIDO LEH IYO XEERARKA QUUDINTA HADHUUDHKA - XOOLAHA
Ma suurtogal in la siiyo bakaylaha qamadida hadhuudhka
Cunto dheellitiran oo nafaqo leh ayaa fure u ah caafimaadka wanaagsan iyo koritaanka degdegga ee bakaylaha. Dalaggu wuxuu ku jiraa nafaqooyin badan iyo, oo ay weheliso cagaarka cagaaran, waa saldhigga quudinta xayawaanka.
Intaa waxaa dheer, quudintani waa kuwo dhaqaale, taas oo yaraynaysa qiimaha xoolaha. Aynu ogaanno waxa dalagga la siinayo bakaylaha iyo sida loo cuno.
Miyuu suurtagal yahay in lagu quudiyo bakaylaha sarreenka
Buunshuhu waa dhaqan aasaasiga ah ee baayacmushtariga, sababtoo ah waa il muhiim ah ee fiitamiinada (gaar ahaan kooxda B) iyo raad raac walxaha. Si kastaba ha noqotee, saamiga ay ku leeyihiin quudinta waa in aysan ka badnayn 25%, si aaney u keenin dhibaatooyin hababka dheef-shiid kiimikaad iyo xajmiga caloosha ee xayawaanka.
Marka laga soo tago qiimaha nafaqada sare, sarreenku wuxuu leeyahay faa'iido kale - sifooyin qallafsan. Tani waxay gacan ka geysataa ilkaha xayawaanka rabaayada inta lagu jiro quudinta waxayna ka hortagtaa inay soo baxaan. Hilibka waa in la bixiyaa laga bilaabo 4 bilood: kobaca dhalinyarada xilliga koritaanka - 10% cuntada guud, dadka waaweyn iyo jilibka hilibka - 20%.
Ma taqaanaa? Tan iyo 1999-kii, Japanese Hironori Akutagawa waxay sawirisay sawir qaade ah oolong ah shabakadda, iyada oo la socotay walxo kala duwan oo madaxiisa ah - sanduuq boxbo ah, gogo 'rooti ah, iyo miraha yaryar. Waxaa suurtagal ah, awooddani waxay ka kacday jacaylka bakaylaha guriga si ay u muujiyaan jacaylka xayawaanka kale iyo milkiilayaashooda, iyagoo madaxyadooda hoos gelinaya hoostooda.
Sida loo quudiyo
Hilibka waxaa ku jira nuujinta bakaylaha qaabab kala duwan - cayriin, caadka oo la kariyey.
Xayawaanka qamadiga ah ee caanaha ayaa si wanaagsan u cunaya, laakiin ha u siin cunto sida gooni ah. Caanaha waa in lagu daraa isku dhafka midhaha ama quudinta. Waxaa la siin karaa labadaba guud ahaan iyo qaabka la jajabiyey. Looma isticmaalo sidii cunto hal mar sababtoo ah waxyaabo sarreeya ee gluten sababay abuurka gaas, iyo sidoo kale saamiga macdanta ee jidhka ayaa dhibta. Wixii sukrolny iyo nuujinta dheddigga iyo xayawaanka ee ku jira naaxinta, saamiga sarreenka ceeriin ee feedka waa la kordhin karaa. Khamriga, oo weli haysta hab aan haboonayn nidaamka dheef-shiidka, suufka cuntada ku sii daa cuntada si tartiib tartiib ah: marka hore, qadar yar oo kaliya ayaa la bixiyaa oo kaliya oo la jajabiyey. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa qaab ah bran, isagoo si fudud u cunaya cagaarka cagaaran ama mashiin leh baradho.
Hubi tusaalooyinka quudinta bakaylaha xilliga jiilaalka.
In foomka soo baxo
Qalabka sarreenka leh waxaa ku jira tiro badan oo ah enzymes iyo fitamiino B, C iyo E, kuwaas oo leh saameyn ku leh dheef-shiid kiimikaadka, shaqeynta xubnaha gudaha iyo heerka difaaca ee bakaylaha.
Waxay ku jirtaa cuntada waqti ka waqti sida fitamiin. Caadi ahaan, noocan oo kale ah hadhuudh ayaa la bixiyaa ka hor inta aan laysku darin, maqaarka cagaaran, iyo agagaarka iyo inta lagu jiro nuujinta. Wixii biqilka waa inuu qaataa nadiif ah, tayo sare leh, hadhuudh aan lahayn calaamadaha caaryada ama cayayaanka. Waa inaysan noqonin cayriin ama la qalajiyey oo ka weyn hal sano kadib ururinta.
Waa muhiim! Ha isla markiiba faafin miro badan, sababtoo ah koritaanka ee afkoda, sifooyinka wanaagsan ee cuntada sida hoos loo dhigo. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la hubiyo in caleemaha caarya ama cayayaanka aaney geli karin cuntada.
Dufanka la safeeyey ayaa si fiican u nuugaya jirka, sababtoo ah waxaa ku jira fibre yar oo aan fiicnayn, sidaas daraadeed waxaa badanaa lagu daraa cuntada dadka nuujinaya iyo kuwa nuujinaya. Waxaa suurtogal ah in aan la wada soconin oo kaliya oo dhan, laakiin sidoo kale hadhuudh la jajabiyey. Si tan loo sameeyo, waa in lagu shubaa biyo karkaraya heerka 1: 2 oo lagu daro 1 tbsp. l cusbo ku jirta baaldi qamadi. Biyaha waa in ay si buuxda u daboolaan hadhuudhka, ka dibna weelka si adag loo xiray oo loo oggol yahay in uu ku shaqeeyo 5 ilaa 6 saacadood. Marka lagu daro sarreenkaas, fiitamiinada iyo kaabayaasha loo yaqaan 'bakay' ayaa la siiyaa. Oo wakhtiga xaydhidda xayawaanku waxay si joogto ah u siin karaan qamadi caanaha ah. Xoolahani waxay gacan ka geysataa korodhka miisaanka firfircoon ee xayawaanka, tan iyo ilaa 30% ee fiber-ka ee si fudud loo nuugo.
Waa faa'iido leh in la ogaado in ay suurtagal tahay in ay ku quudiso bakayleyda leh digir, rooti, ​​polynya, tufaax, isteroberi, farshaxanno Yeruusaalem, miisaan.
Wixii khamiir ah, qamadi cireed ah oo la dubey oo lagu daro khamriga kalluunka wax lagu dubay biyo diirran ayaa loo isticmaalaa. Waa inay noqdaan qiyaastii 1-2% wadarta guud ee hadhuudhka. Suufka soo go'ay waa in si fiican loo qaso oo u baxaa si kulul ilaa 6-9 saacadood ilaa la kariyo.
Sida loo yareeyo qoorta for bakaylaha
Tilmaamaha tallaabada tallaabo ee biqilka qamadida:
Si fiican u dhaq galka sarreenka mug weyn oo biyo qabow.
Ku qoy miiraha biyaha heerkulka qolka oo ka tag maalin maalin diiran.
Isu ururi oo ka saar dhammaan maaddada ay u fuulaan dusha biyaha.
Biyaha ka daadi oo ku dar foornada bararsan ee lakabka yar oo ku yaalla balaastikada, weelka wax lagu dubo ama weel kale oo dabiici ah oo leh geeso yar.
Ku darso maaddada maro qafiif ah oo nadiif ah, dhar faashad leh iyo meel diiran.
Maalmo yar ka dib ayaa caleemaha ayaa soo baxaya oo quudinta ayaa diyaar u ah isticmaalka.
Maxaa kale oo ay ku karsan kartaa bakaylaha ka soo baxa firida
Dalaggu waa inuu qaataa ilaa 60% cuntada guud ee bakaylaha. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan siinin xoolaha oo keliya hal nooc oo siriyaal ah, sababtoo ah waxay u horseedi doontaa xad-dhaaf ah qaybaha raadadka qaarkood iyo raad xun oo ku saabsan caafimaadka bakaylaha. Marka lagu daro isku dar ah hadhuudhka, raashinka xayawaanka ee xayawaanka waa in lagu daraa quudinta, cawska ama caleenta, cake, fitamiin iyo macdanta.
Waa muhiim! Dumarka inta lagu jiro nuujinta waa in la siiyaa isku-dar ah firida oo ka kooban miro iyo shaciir si isku mid ah. Waxyaabaha soo saaraha ragga ah waxaa la siiyaa iskujirrada oo ka kooban 25% qamadida iyo 75% miro.
Dalaggu wuxuu ka kooban yahay kalooriyada ugu sarreeya ee dalagga hadhuudhka kaas oo bakaylaha la cuno. Waxay saameyn wanaagsan ku leedahay dheefshiidka xayawaanka, waxay tirtirtaa caloosha oo waxay caawisaa miisaan culus oo culus. Sababtoo ah joogitaanka amino acids qiimaha ay ka kooban tahay, ari waxaa la siiyaa bakaylaha xilliga nuujinta si loo wanaajiyo tayada caanaha, iyo sidoo kale xayawaanka yar yar inta lagu guda jiro u gudubka cuntada caadiga ah. Si loo fududeeyo nadiifinta siriyalka tan waxaa lagama maarmaan ah in la hor mariyo.
Bakeyaha yaryar ayaa ka fiican in la siiyo qadar yar oo ah shaciir la jajabiyey oo ay ku haboon tahay bilawga horudhaceeda xilliga xagaaga. Kaluunka waa in la siiyaa qaybta soo socota ee cuntada guud: xayawaanka yaryar ee muddada koritaanka - 15%, dadka qaangaarka ah - 20%, cayayaanka hilibka - 40%.
Waxyaabaha ka kooban siriyaalkani waxay ka kooban yihiin pantothenic acid qiimo leh, taas oo saameyn ku leh faa'iidada taranka iyo habka guud ee jirka ee bakaylaha.
Ogow waxa hadhuudhku ka wanaagsan yahay in la quudiyo bakaylaha.
Inkasta oo darajada calorie ee aadka u sarreeya, miro, ka duwan tahay hadhuudhkii la mid ah, kuma biirin cayilka. Isku dar ah caanaha kale iyo cagaarka cagaaran, saamiga miraayada cuntadu waxay gaari kartaa ilaa 50%. Mawduuca aan la karinin ayaa la siin karaa bakayle sida ugu dhakhsaha badan ee uu u bilaabayo inuu wax cuno. Dalaggan waa in la siiyaa saamiga soo socda ee wadarta guud ee cuntada: koritaanka dhalinyarada muddada koritaanka - 30%, dadka qaangaarka ah - 40%, noocyada hilibka - 15%.
Ma taqaanaa? Wuxuu ku dhashay 1964 jasiiradda Tasmania, Floppy Rabbit wuxuu dhigay rikoodhka nolosha ee ka dhex jira qoyskiisa. Floppy waxay ku nooshahay 18 sano iyo 10 bilood waxayna ku dhimatay kaliya 1983-kii. Si kastaba ha ahaatee, rikoorkaan waxaa loo tixgelin karaa in la garaacay: Maanta Nova Scotia waxay ku nooshahay heysta rikoodhka mustaqbalka, kaasoo horey u jiray 24 sano.
Dhaqankan wuxuu leeyahay karbohydrate sare, taas oo ka dhigaysa il muhiim ah oo tamar ah. Qeyb ka mid ah hadhuudhka, waxaa jira waxyaabo badan oo fitamiin E, carotene, kalsiyum, borotiinno iyo dufan, kaas oo ka caawiya miisaanka firfircoon ee firfircoon waqti gaaban, sidaa daraadeed waa inaadan si xun u cunin siiriyaalka si uusan u keenin cayilka xayawaanka. Way ka fiican tahay in la isticmaalo isugeynta isku dhafka miraha leh qaybta aan ka badnayn 25% wadarta guud. Intaa waxaa dheer, si loo helo nuugista miraha, waxaa lagula talinayaa in horay loo shiido. Corn waa in la siiyaa shakhsiyaad afar bilood gaaray, qaybta soo socota: Kobaca dhalinyarada xilliga koritaanka - 30%, dadka qaangaarka ah - 10%, jilibka hilibka - 15%.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka quudinta bakaylaha leh hadhuudh.
Kala beddelashada iyo isku darka dalagyada kala duwan, waxaad siin kartaa xayawaankaaga cunto nafaqo leh iyo kala duwan. Tani waxay u kuur galin doontaa dhammaan fitamiinada iyo walxaha lagama maarmaanka ah waxayna u oggolaaneysaa inay koraan, xoog iyo caafimaad lehaadaan.
Beershaxaynta beerto xilliga dayrta
Waxaan koraan kaabajka madaxtooyada
Ficus waa learo guriga
Doofaarrada fiiqan ee Vietnam
Waxaan koraan qariirada gudaha (abutilon)
Darlingtonia Californian waa booqasho naadir ah oo ku yaalla guryaha dadka jecel qolalka qolka, sababtoo ah waa warshad aad u adag oo waa lagama maarmaan inay abuurto xaalado gaar ah. Qeexitaanka dhirta Darlingtonia Californian waxay la mid tahay rugta, taas oo meesha ka saartay daboolka. Qaab dhismeedka khaaska ah ee caleemaha, ubaxa waxaa lagu magacaabaa lafa ubaxa. Read More
Sidee u koraan begonous begon? Noocyada dhalmada ubaxyada iyo daryeel dheeraad ah
Noocyada Herbisid: Ilaalinta Beedka